जापानमा क्यामेरा किन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानदिनु पर्ने कुराहरु । | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > जापानमा क्यामेरा किन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानदिनु पर्ने कुराहरु ।
जापान जति टेकनोलोजिमा बिकासित छ तेति नै सुन्दर पनि। मनमोहक दृश्यहरूले मन्त्रमुग्ध बनाईरहदा ति मनोरमतालाइ क्यामेरामा कैद गर्नुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। पुराना मन्दिर र कला देखि मनै लोभ्याउने समुद्र तट, रहस्यमय बांस वन देखि वसन्तमा ढकमक्क फूल्ने साकुरा प्रोफेस्नल फोटोग्राफर को लागि मात्र नभएर फोटो पारखि हरुको लागि पनि उत्कृष्ट स्थान हो।
जापानले क्यामेरा र फोटोग्राफिको क्षेत्रमा अब्बल ब्रान्ड्हरु विस्व्सामु पस्किएको छ।क्यानोन, निकोन, फुजिफिल्म, ओलिम्पस मात्र केहि उदहरण हुन। त्यसकारण क्यामेरा पारखिकोलागि चाहे नया क्यामेरा किन्न होस या क्यामेरा को एक्सेसोरिज किन्न, जापान स्वर्ग हो भन्दा फरक पर्दैन। यथावत सोचेको जस्तो सजिलो भने पक्कै हुदैन। यो लेखको मार्फत हजुरहरुलाई जापानमा क्यामेरा किन्दा काम लाग्ने टिप्सहरुको जानकारी गराउनेछौ।
1. क्यामेरा स्टोर छनौट गर्नुहोस्
A post shared by Matt (@dekapes) on Dec 26, 2018 at 8:34am PST
जापानको प्रमुख इलेक्ट्रोनिक स्टोर भन्नु पर्दा यामादा देन्कि, योदाबसी क्यामेरा, बिक क्यामेर हुन। यि स्टोरहरु प्राय जापानका सबै प्रमुख शहरमा छन। यि तीन स्टोरमा बजारमा पाइने लगवग सबै ब्रान्डका क्यामेरा र क्यमेरा क एक्सेसोरिज हरु पाइन्छ। ति क्यामेरा सिकारु देखी प्रोफेस्नल फोटोग्राफर , युट्युबर्, फिल्ममेकर, ड्स्ल्र देखी मिररलेस हेरेर मुल्य पनि फरक फरक हुन्छन। त्यसैले सर्बप्रथम आफुलाई कुन रेन्ज को चाहिने हो त्यो फिक्स गरेर स्टोर जादा समय को धेरै बचत हुनेछ।यि स्टोर सङ्सगै जापानम लाईका ह्यस्लेब्ल्याड जस्ता बडी मुल्यपर्ने ब्रान्डका बुटिक स्टोर हरु पनि छन। लाईकाको स्टोर क्योतो र टोकियोमा छ।
Yodobashi Camera*Automatic translation
Official Leica store locator
Sony Japan Website *Japanese Only
Canon Store Website　*Japanese Only
Panasonic Website　*Japanese Only
2. अङ्ग्रेजी सेटिङ ?
यो सबै भन्दा महत्तोपूर्ण टिप्स हो। हजुरले छान्नु भएको क्यामेरामा english language setting छ वा छैन चेक गर्नुहोस। सोनि, क्यानोन , निकोनका क्यामेरा हरुमा प्राय अङ्ग्रेजी सेटिङ हुने गर्छन। तर जापानिजहरु को लागि टार्गेट गरेर बनाइएका क्यामेराहरुमा अङ्ग्रेजी सेटिङ राखिएकोहुँदैन।पछी अङ्ग्रेजी सेटिङ को लागि स्फटवेर हाल्नु पर्ने झनझट हुने भएकोले गर्दा किन्दा खेरी ध्यान पुराउन जरुरी हुन्छ।
A post shared by Phantography (@phant0mphotography) on Apr 10, 2019 at 9:38pm PDT
त्यसकोलागी स्टोर को स्टाफ लाई सेटिङ को ’boutमा सोध्नुहोस। क्यामेरा किन्ने पक्का भएछी पनि क्यामेराको म्यानुअल पनि जापानिजामअ हुने भएको ले त्यो पनि इङ्लिश मा छ छैन चेक गर्नुहोस। म्यानुअल मात्र अनलाईन वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्नसकिन्छ।
3. क्यामेरा टेस्ट गर्नुहोस्
स्टोरमा प्राय सबै खाले क्यामेरा आफैले चलाएर हेर्न मिल्ने खाल्को हुन्छ। यदी डिस्प्लेमा हजुरले खोज्नुभएको क्यमेरा राखिएको छैन भने स्टोर स्टाफलाई सोध्नुहोस। महँगो full frame क्यामेराहरु डिस्प्लेमा नराखिएको हुन सक्छ। क्यामेरा भनेको हतारमा किनिनेसामान नभएकोले किन्नु पूर्व आफैले हातमा लिएर टेस्ट गरेको राम्रो हुन्छ।
यि स्टोरहरुमा आफुले मेमोरी कार्ड लिएर फोटो खिचेर पछी आफ्नो कम्प्युटरमा हेरेर क्यामेरा किन्ने वा नकिन्ने सोच्न सकिन्छ। त्यसैले क्यामेरा किन्नु पूर्व धेरै भन्दा धेरै सो क्यामेराले फोटो लिनुहोस। क्यामेरासँग कम्फोर्टएबल हुनुहोस।
4. ट्याक्स फ्री
जापानमा समान हरु किन्दा ८% कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर यदी हजुर जापान आउनु भएको ६ महिना भित्र मा फर्किनु हुन्छ भने हजुरले कर तिर्न नपर्ने हुन सक्छ। त्यस को लागि हजुर ले आफ्नो पासपोर्ट लिएर स्टोर जानु पर्ने हुन्छ। कर नतिर्नको लागि हजुर ले किन्नु वएको समान ५००० एन भन्दा माथि र ५००००० एन भन्दा मुनी को हुनु पर्छ। क्यामेरामा पनि कर तिर्न नपर्ने हुन सक्छ। हजुरले १ लाख एन को क्यामेरा किन्दा १ लाख ८ हजार तिर्नु पर्ने ठाउमा १ लाख मात्र पर्न जान्छ। पासपोर्ट चाही लना नबिर्सिनुहोस। पास्पोर्ट को फोटो वा फोटोकोपी मान्य हुँदैन।
5. क्यामराको गयारेन्टी ?
के क्यामेराको गयारेन्टी अरु देशमा छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिदा राम्रो हुन्छ। यि स्टोरहरु जापानकै ठुला स्टोर हरु भएकाले त्यहाँका स्टाफहरुले गयारेन्टीको ’bout हजुरलाई बृस्तित रुपम भन्न सक्छन।
समग्रमा भन्नु पर्दा जापानको स्टोर मा क्यामरा किन्दा हजुरले राम्रो अनुभव बटुल्ने हुनेछ। अनि यि टिप्स ध्यान गर्नु भयो भने हजुरले किनेको क्यामरा मा पछुताउनुपर्ने हुँदैन।